Igwe onyonyo kacha mma nke 2017 ị nwere ike ịzụta | Akụkọ akụrụngwa
TV kacha mma nke 2016
José Alfocea | | TV
Ọtụtụ n'ime anyị niile nwere ike ịnụ ụtọ ihe nkiri anyị na-amasị, usoro na egwuregwu na TV dị mma n'ụlọ, yana nnukwu ihuenyo na ezigbo foto na ogo dị mma, mana anyị adịghị njikere ịhapụ kaadị kredit anyị na-ama jijiji. N'ụzọ dị mma, telivishọn bụ ụdị ngwaahịa anyị na-adịghị emegharị kwa afọ, dịka ọ na-adịkarị na ama, mana anyị na-azụta ha na ebumnuche nke afọ ise ruo afọ iri. Nke a na-enye anyị nnukwu uru karịa eziokwu ahụ bụ na, na-egbochi ọdachi, ọ ga-ewe ogologo oge itinye ego na telivishọn ọzọ.
Uru ahụ abụghị ike ọzọ kpoo igwe onyonyo di elu na onu ahia, na maka nke a, ihe dị mfe dị ka ilele televishọn ndị bịara n'afọ gara aga. Ke ofụri ofụri, ọ bụla nke kacha mma telivishọn nke 2016 ha nwere obere ihe dị iche na ụdị ndị pụtara na afọ a, agbanyeghị, anyị nwere ike ịchekwa ezigbo ego na, dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ike igbunye iji nweta usoro ụda, ihe ọkpụkpọ BluRay ọhụrụ, kwụọ anyị ezigbo ụgwọ nke ụgwọ ọnwa Netflix, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọ masịrị ya. Yabụ, iji nye gị aka na ọrụ mmegharị gị, taa anyị ewetara gị nhọrọ na ụfọdụ n'ime kacha mma telivishọn nke 2016 ọnụahịa kacha mma.
Anyị na-amalite na nke a sonyzd9, telivishọn dị n'ọtụtụ nha ihu (65, 75 na 100 sentimita asatọ), ya mere, ọ gaghị adabara obere ime ụlọ. Kpachara anya, n'ihi na ọnụahịa ya dị elu, mana yana ogo ya. Jiri otu gụọ dị mma n'anya ma mara mma, 4K mkpebi dakọtara na HDR, Usoro ọkụ Backlight Master mbanye, X1 Oke ihe nhazi ihe oyiyi, bịa, ị ga-enwe ọmarịcha onyonyo kacha mma. Na mgbakwunye, ọ na-agbakwunye gam akporo TV ka ị nwee ike iji ọtụtụ ngwa.
Site n'ụdị dị nwayọ karịa anyị nwere igwe onyonyo Panasonic TX-40DXU601, ngwaọrụ nwere ya Ihuenyo IPS 40-anụ ọhịa na mkpebi nwere ike iru 4K UHD 3.840 x 2.160 pikselụ. N'ezie, imewe ahụ na-adọta uche anyị, ya na okpokoro agba dị ezigbo mkpa ma nwee ezigbo nsogbu. N'ezie, n'adịghị ka nke gara aga, ụdị a adabaghị na ọdịnaya HDR mana ka mma dị mma, ọ na-etinye ya Firefox dị ka sistemụ arụmọrụ maka Smart TV ma nwee ezigbo ọnụọgụ na njikọ dịgasị iche USB, HDMI, Ethernet na ndị ọzọ.
Anyị na-aga South Korea ikwu maka Samsung UE49KS8000 a, igwe onyonyo 49 anụ ọhịa ahụ (dịkwa na 55 na 65 sentimita asatọ) na mkpebi 4K UHD, Quantum Dot Color technology, HDR 1000 sistemụ, nke jikọtara ọnụ, na-enye anyị ụdị onyonyo a na-enweghị atụ, ya na ndị ojii miri emi, agba chara acha ma na-adọrọ adọrọ ...
Igwe TV mara ihe nwere sistemụ arụmọrụ Tizen os (site n'ụlọ ahụ n'onwe ya), yana nwekwara njikọta dịgasị iche iche na ọnụọgụ dị iche iche ka ị nwee ike ijikọ ngwaọrụ ndị ọzọ: HDMI, USB, WiFi, Ethernet ...
Nhọrọ ọzọ dị elu dị elu bụ nke a Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla., a telivishọn na 65-inch OLED ihuenyo na nnukwu mkpebi 4K UHD na Dolby Vision HDR usoro. Ekele maka otu a, ndị ojii ga-abụ nke kachasị omimi ị hụtụrụla, a ga-akọwapụta onyinyo ndị ahụ nke ọma na agba ga-abụ nke ọma na nke ọma.
Ọ bụkwa telivishọn dị ezigbo mkpa nke nwekwara ezigbo ụda usoro nke Harman Kardon haziri, ọtụtụ njikọta na Smart TV nwere sistemụ arụmọrụ webOS. N'ezie, ọnụ ahịa ya ka na-egbochi ọtụtụ ndị ọrụ.
Anyị na-aga n'ihu na nhọrọ anyị nke TV kacha mma nke 2016 na Sony KDL-40WD650 a, TV dị ike ma mara mma, ọ bụghị ndị na-enye ọnụahịa dị ọnụ ala ma na-adọrọ mmasị karị. Ọ nwere 40 inch ihuenyoas na mkpebi HD zuru ezu 1.920 x 1.080 pikselụ na Motionflow XR + sistemụ na X-Reality Pro ihe nhazi ihe oyiyi, ọtụtụ aha dị egwu nke na-atụgharị gaa na ezigbo eserese eserese maka ime ụlọ ma ọ bụ ime ụlọ.
Su oyiyi doro anya, dị nkọ, nke dị ọcha, na-enwu gbaa ọcha, na-agbanwe agbanwe, miri ojii. Na ihe a niile n'agbanyeghị enweghị mkpebi 4K.
Ọzọkwa pụta ìhè ya imewe, mara mma, mara, nke kachasị nke Sony Japanese. Chefughi ọdụdụ USB ya abụọ, ntinye Ethernet, ọdụ ụgbọ mmiri ya abụọ HDMI, WiFi na sistemụ jikọtara smart TV.
Anyị na-aga n'ihu na ụdị ọzọ nke telivishọn South Korea, nke a Samsung UE55KS7000, a mma 55-anụ ọhịa ihuenyo TV 4K UHD 3.840 x 2.160 pikselụ na sistemụ HDR nke ahụ na-ejikwa nkà na ụzụ eme ihe Colordị Dotum Dot Agba, ihe sụgharịrị ịbụ ihe karịrị otu ijeri agbana a doro anya, dị ọcha, nkọ image, nke ọma kọwaa, na agba ndị doro anya, ndị ọcha na-enwu gbaa na ndị ojii dị egwu.
Ma dị ka ọ dị na mbụ na ụlọ ọrụ ahụ, njikọta kwụpụta ma n'ọtụtụ na nke ukwu (USB, HDMI, Ethernet ...), inwekwa njikọta WiFi na smart TV na sistemụ arụmọrụ Tizen OS.
Anyị na-emegharị akara na mba n'ihi na anyị ga-ekwukwa TV site na South Korea LG, oge a bụ ihe nlereanya LG OLED55C6V, a na ngwaọrụ na incorporates a nnukwu panel na LG OLED technology na a size nke 55 sentimita. Ọ na-aga n'ekwughị na nke a bụ telivishọn maka ndị na-adịghị edozi maka ihe ọ bụla, kama ha chọrọ mma oyiyi kacha mma. Ọ bụ ya mere, site na teknụzụ OLED, ị nwere ike ịnweta oji miri emi nke ị na-echetụbeghị mbụ, nkọcha na nghọta doro anya, na nkọwa doro anya, na-enwu gbaa, na agba agba. N'ezie, ọ na-enye 4H UHD mkpebi na nkwado maka HDR ọdịnaya Dolby Vision, ya mere ị nwere ike ịnụ ụtọ ugbu a ogo kachasị elu nke usoro ọkacha mmasị gị na ihe nkiri.
Na mgbakwunye, LG OLED55C6V TV a na-enyekwa nhọrọ njikọta sara mbara (Ethernet, WiFi, ọdụ ụgbọ USB atọ, njikọta HDMI atọ ọzọ) yabụ ị nwere ike ijikọ ọtụtụ ngwaọrụ.
Na anyị na-aga n'ihu na-enweghị na-akpụ akpụ site na South Korea ókè kpọọ ọzọ Samsung nlereanya na ọ bụ na nke a ike, tinyere LG, ị na-ahụ na ha na-achicha na okwu nke mma telivishọn.
Oge nke a ka anyị ga-atụ aka Samsung UE65KS9000, a «super TV» nke ị ga - achọ inwe ezigbo ụlọ ebe ọ na - emejuputa nnukwu 65 anụ ọhịa ahụ na mkpebi 4K UHD eji akụrụngwa kachasị mma na ụlọ ọrụ: teknụzụ Nwa ojii nke na-ezere ntụgharị uche, teknụzụ, Colordị Dotum Dot Agba nke anyi kwurula banyere ya n'elu, sistemụ Onye na -enye ihe ọmụma kacha elu iji nweta ìhè dị egwu, igwe nha SUHD Remasting Engine nke na-ahụ maka imeziwanye ogo na mkpebi nke ihe oyiyi mgbe ọ nwere obere mkpebi na, n'ezie, usoro Ihe ngosi HDR 1000.
Na ihe niile a gbasara ihe dị egwu curved panel nke ahụ ga-enye gị ahụmịhe nke onwe, nke zuru oke na nke itinye ego, yana ị nwere ike ịgbasa ekele maka njikọta WiFi na Ethernet, ma ọ bụ ọdụ ụgbọ USB atọ ya na njikọta HDMI atọ ya.
Oops, ọ fọrọ nke nta ka m chefuo! Iji Samsung UE65KS9000 ị nwekwara ike ịnụ ụtọ ọtụtụ ngwa ị kachasị amasị gị n'ihi sistemụ smart TV Ọ nwere Tizen OS dị ka sistemụ arụmọrụ.
Mana ọ bụghị onye ọ bụla nọ na TV na-agbagharị gburugburu Sony, LG, ma ọ bụ Samsung, bụkwa Philips, n'oge na-adịbeghị anya mara mma maka bọlbụ ya ma anyị ga-ebipụ ha ụdị ọ bụla, nwere ihe ọ ga-ekwu banyere ya na TV. Philips 43PUH6101, ihe ngosi di egwu na enyo 43 inch LED na 4K mkpebi (3840 x 2160) nke gunyere smart TV ya mere ị nwere ike ịnụ ụtọ ọdịnaya kachasị amasị gị na nyiwe dịka Netflix ma ọ bụ HBO ozugbo, na-enweghị mirroring ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri ya.
Ego ole kwa Nnukwu teknụzụ na-ebuli elu, yabụ ị nwere ike ịnụ ụtọ kacha mma ọbụlagodi mgbe ihe onyonyo ahụ nyere mkpebi dị ala.
Anyị enweghị ike iwepụta nke gị imewe, mara mma na nke oge a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na enweghị okpokolo agba, na ụkwụ ndị na-ekwu ihe niile dị mkpa na ihuenyo ahụ. Mana nke kachasị mma bụ ọnụahịa ya, ị chere na ịnwe telivishọn dị ka nke a ihe dị ka narị euro anọ? Ee ee, ọ ga-ekwe omume.
You chọrọ karịa? Olu gbara gburugburu, njikwa ụda nwere ọgụgụ isi, ọdịyo nwere 16 W nke ike, ihe njikọ HDMI anọ, njikọ USB atọ, njikọta WiFi, mmepụta ụda dijitalụ (ngwa anya), Ethernet na ọtụtụ ndị ọzọ gbanwere TV a otu n'ime nhọrọ kachasị mma na njiri mara - ọnụahịa.
Na anyị gwụchaa ọzọ telivishọn nke oké mma na nnọọ oké ọnụ price. Dị ka nke gara aga, nke a LG 43LH590V 43 "Full HD ... Nke ahụ bu ihe efu. ọ dịkwa ihe dị ka narị euro ise (mgbe ụfọdụ ọbụlagodi obere).
Ihe Nlereanya LG a na-enye anyị ihuenyo 43 sentimita na mkpebi Full HD (1920 x 1080 pikselụ), WiFi na Ethernet Njikọta, smart TV na webOS sistemu eji arụ ọrụ, ọdụ ụgbọ mmiri HDMI abụọ, ọdụ ụgbọ USB yana ụdị kpochapụwo ọzọ.
Ọnọdụ ịhọrọ site na, na-enweghị obi abụọ nke gara aga Philips nlereanya na-enye ogo dị elu dị elu yana nhọrọ njikọta ka ukwuu, agbanyeghị, ọ bụrụ na enwere nnukwu ọdịiche na ego n'oge nzụta gị, mmefu ego gị siri ike na ịchọghị ọtụtụ njikọ , nke a nwere ike ịbụ ezigbo nhọrọ.
Ya mere, dị nnọọ anyị nhọrọ na ụfọdụ n'ime TV kacha mma nke 2016. Cheta na nke a bụ naanị atụmatụ ebe enwere onyinye buru ibu na ahịa, oge ụfọdụ, nke obere ụdị ama ama mana onye mma ya nwere ike iju anyị anya. N'ọnọdụ ọ bụla, tulee nke ọma mgbe ị na-ahọrọ TV ọhụrụ dịka mkpa gị si dị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Foto na ụda » TV » TV kacha mma nke 2016
Mgbe afọ ole na ole gachara, Apple TV laghachiri Amazon
Twitter na-apịa 280 agwa tweets, anyị na-egosi gị otu esi eme ka njedebe ọhụrụ ahụ rụọ ọrụ